အသက်၁၄နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်လေး ခန္ဓာကိုယ်ပျော့ပြောင်းလွန်းလို့ ဒိုင်လူကြီးတွေတောင်အံအောမှင်သက်ခဲ့ရ » Today Bago
HomeLifestyleVideoအသက်၁၄နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်လေး ခန္ဓာကိုယ်ပျော့ပြောင်းလွန်းလို့ ဒိုင်လူကြီးတွေတောင်အံအောမှင်သက်ခဲ့ရ အသက်၁၄နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်လေး ခန္ဓာကိုယ်ပျော့ပြောင်းလွန်းလို့ ဒိုင်လူကြီးတွေတောင်အံအောမှင်သက်ခဲ့ရ June 8, 20170comments Khine Khine Myint Posted in Video0အသက်၁၄နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်လေး ခန္ဓာကိုယ်ပျော့ပြောင်းလွန်းလို့ ဒိုင်လူကြီးတွေတောင်အံအောမှင်သက်ခဲ့ပါတယ်။ မြှားကိုတောင် ခြေထောက်နဲ့ပစ်ပြီးလက်စွမ်းပြခဲ့တာပါ။
14-year-old contortionist, Sofie Dossi doesawhole lot more than bending her body.
Posted by America's Got Talent on Dienstag, 28. Juni 2016
ဂွပေါက်ထဲငယ်ပါ တစ်နေခဲ့လို့သွားဆရာဝန်ဆီအကူအညီတောင်...	June 8, 2017	0 comments 5မိနစ်ထဲနဲ့ သင်ပြုလုပ်နိုင်မယ့် အရမ်းမိုက်တဲ့ ဆပ်ြ...	June 8, 2017	0 comments Share this 4SHARESFacebookTwitterGooglePinterestRedditTumblr